Arrimo kusoo kordhay Cadaado, walaacna ku abuuray Galmudug | Saxil News Network
Lahaanshaha sawirkaRAADIYOOW MUQDISHOOW
Image captionCiidamo NISSA
“Markii madaxtooyada loo raray Dhuusamareeb, maamulka waa uu isaga tagay meeshan, albaabada oo furan ayaa xitaa laga tagay, anaga ayaa meesha geynay ciidamo si kumeelgaar ah u illaaliya, kuwii ayaan hadda meesha ka wareejinay, wax xasarad ahna kama aysan dhicin” ayuu yiri guddoomiyaha.
“Ma ahan in taag dari loo qaato dulqaadka Galmudug” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Hase yeeshee madaxweynaha hadda jooga Axmed Ducaale Xaaf oo mar uu taleefishinka Horn Cable weeydiiyay in 2 sanno la doortay iyo in kale, ayuu ku jawaabay “Yaa kugu yiri 2 sanno ayaa la doortay, aniga ma madaxweyne ku xigeen badelay madaxweyne dhintay baan ahay?, aniga afar sanno ayaa la i doortay, waxaanan ahay madaxweyne buuxa”.
Khilaafka ayaa cirka isku sii shareeray dhawaan , waxaana arrintan warbaahinta u qirey madaxweyne Xaaf oo yiri “Dowladda federaalka waan aan illaa hadda jawaab ka hayno ma jirto, madaxweynaha go’aankii aan kusoo wada gaarnay Garoowe waxbo kama fulin, mid aan Fahad (Agaasime ku xigeenka hay’adda nabad suggida qaranka ee NISA) ku wada hadalnay Nairobi waxbo kama fulin, … anaga waxbo naga qaadi maayaan, waan ka gaashaamanay”.
Sida uu qirey guddoomiyaha Cadaado, ma jirin wax hawl ah oo ka socotay madaxtooyada intii muddo ah, waxaana kaliya ku sugnaa ciidamo illaalo ka hayay